Hlanganisa inguqulo yakamuva yeMAME | Kusuka kuLinux
Yakha inguqulo yakamuva ye-MAME
I-NauTiluS | | Imidlalo
Ngalesi sikhathi, ngizokhuluma ngokuthi kanjani hlanganisa inguqulo yakamuva ye MAME, ngoba leli elisekhasini elisemthethweni linezithiyo ezithile zesikhathi sokuhlanganisa.
Into enhle ngokuhlanganisa izinhlelo zekhompyutha yakho ukuthi uthola okuningi kuyo, ikakhulukazi iprosesa emaphakathi, ngoba ama-emulators ngokuvamile ayisebenzisa kakhulu. Futhi, ukufakwa kwe- ngaphambili ukuxhumana kangcono kakhulu nohlelo.
Lo mhlahlandlela noma okokufundisa kwenzelwe abantu abangahambisani njengoba kuza MAME kwendwangu. Ngakho-ke izinzuzo ziyabonakala uma wenza ukuhlolwa kwendawo. 🙂
Ukuqala ngomsebenzi wokwakha, saqamba imithombo yohlelo, senza okulandelayo:
Ungalandi inguqulo umthombo wekhasi umabhebhana, ngoba inika amaphutha amaningi ekuhlanganisweni.
Abasebenzisi be I-Debian-Ubuntu, faka lawa maphakeji:
build-essential gconf2 libgconf2-dev libgtk2.0-dev libsdl1.2-dev libsdl-ttf2.0-dev
Abasebenzisi be I-Archlinux, Ngiyaxolisa, kepha besengivele ngiyifakile imitapo yolwazi isikhathi eside, bheka nje la ekhona bese ubheka uzakwabo nayo pacman.
git clone git://git.redump.net/mame
Lapho inqubo yokwenza ikholomu iqedile, iya enkombeni edaliwe, kulokhu, isiqondisi esizenzakalelayo senziwe «mame ».
Kakade ngaphakathi kwalesi siqondisi, sizoba nochungechunge lwamafolda namafayela. Ukusuka lapha, sinesithakazelo kuphela ku- makefile. Bayayivula ngesihleli sombhalo abazikhethele sona bese sibheka okufana nalokhu:
#ARCHOPTS = -march=native # optimize for local machine (auto detect)
Futhi siyanqamula lowo mugqa, ukuthi uhlala njengoba kubonakala esithombeni esilandelayo.
Silondoloza ushintsho, futhi lapho lapho siqala ukuhlanganiswa ngomyalo wokwenza:
Uma ufuna ukuthola okuningi ngesikhathi sokuhlanganiswa, sebenzisa ukwenza -j # kuphi # inombolo yama-cores eqenjini lakho.
Ukuthola ukuthi mangaki ama-cores ikhompyutha yakho anayo, qala lo myalo ku-terminal: grep -c ^ iprosesa / proc / cpuinfo
Lapho inqubo yokuhlanganiswa isiqedile umsebenzi wayo, ifayili lizovela liqanjwe ngokuya ngokwakhiwa kohlelo njengo mame uma uku-32bits noma mame64 ngama-64bits.
Endabeni yami, ngisohlelweni olungama-64-bit.
Yebo, kuze kube manje asinankinga, sesivele singadlala imidlalo ngohlelo, kepha kunzima kakhulu kwabaqalayo. Ngakho-ke ake sikugcwalise ngohlelo qmc2.
Lapho, ewindini elifanayo sisebenzisa yogurt ukufaka ingaphambili.
yaourt -S qmc2
i-sudo engeza-apt-repository ppa: mmbossoni-gmail / emu sudo apt-get update sudo apt-get ukufaka qmc2-sdlmame qmc2-sdlmess qmc2-sdlume qmc2-arcade qchdman
Okwabasebenzisi be Ubuntu / Debian
Kopisha ifayela elisebenzisekayo le-mame kule ndlela njenge: / usr / imidlalo / mame
Bese bevula uhlelo qmc2-smlame futhi leli windi lizovela:
Njengoba ukwazi ukubona, lolu hlelo aluceli okuningi.
Izinto ezibaluleke kakhulu kuleli windi ziyindlela yefayela elisebenzisekayo, umkhombandlela osebenzayo nendlela yama-roms.
Indlela ye-mame ephathekayo, ungaba nayo noma kuphi lapho ufuna khona, inqobo nje uma utshela uhlelo lapho okusetshenzelwa khona, kuyafana nemidlalo.
Futhi nangu u-mame esebenza. Kulapho, sengivele ngizama umdlalo, enye yezintandokazi zami zemishini yokubheja, izinhlamvu zemali eziningi engizithatha ngesikhathi sazo, manje yimi engithola ijusi lapha. i-xD
Esethu MAME esenzweni
Ukubingelela nokudlala sekushiwo 😀
Lesi yindatshana yami yokuqala yale bhulogi, ebengilokhu ngiyilandela isikhathi eside ngegama lesidlaliso likaMauricio, ngeposi lakhe elithandekayo nokuthi uhlala enokuthile okusha angakukhombisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » Yakha inguqulo yakamuva ye-MAME
Amazwana ayi-28, shiya okwakho
KuGoogle, umngani 🙂
I-athikili enhle kakhulu ukukhumbula ukuthi ngaphambi kweSteam kwase kunemidlalo yamavidiyo ku-GNU / Linux. Azizintsha noma zingabokuzalwa, kepha zinganikeza ngamahora ayizinkulungwane wamahhala wokuzijabulisa nobumnandi.
Futhi ngithanda ukuqamba UME (http://mamedev.emulab.it/haze/), isinyathelo esixuba iMame ne-Mess (uma uMame esebenza ngamageyimu we-arcade, i-Mess with video consoles), enza i-emulator ye-multi-system yangempela. Ngikubone kuphela kumakhosombe we-OpenSUSE emulator nasemphakathini we-ArchLinux, kepha ukuyihlanganisa ku-Debian izinyathelo ezizolandelwa zifana kakhulu nalezo ezivezwe yiNauTiluS zeDebian / Ubuntu.
Uma uhlela i-makefile, bese uya kulayini 27, uzothola ukuguquguquka okubalulekile. Lokhu kuguquguquka yikhona okucacisa inhloso yokwakha, kube yilezi: MAME, UME, MESS, njll.
Esimweni sakho, yishintshele ku-UME, uzothola lokhu kusebenze.
lapho ngenza ngithola okulandelayo:
src / osd / sdl / sdl.mak: 519: *** I-Qt's Meta Object Compiler (moc) ayitholakalanga!. Phezulu.
Ngisebenzisa ama-Kubuntu 12.04 32 bits
Kubonakala kimi ukuthi kuyakuxwayisa ukuthi udinga ukufaka i-moc; Ngemuva kokwenza ucwaningo oluthile, ngithole ukuthi ongakudinga yizimoto, kepha anginasiqiniseko. Zama ukusesha ngeSinaptic noma nge-Aptitude, angikhumbuli ukuthi iyiphi esebenzisa uKubuntu.
Ngiyabonga, ngabe ukufaka i-moc ne-automoc futhi kuyahlanganiswa
Ingabe kulula ukuthi kufakwe inguqulo yakamuva ye-mame? Ngibuza ukuthi kungani lapho ngilayisha i-deb-multimedia repo, ngafaka i-mame yesimanje kunaleyo yokuhlola i-debian, kepha ... imidlalo eminingi yeka ukusebenza. ngakho-ke ngagcina inguqulo ye-debian nezinkinga ze-bye.
Angiqiniseki kepha ngicabanga ukuthi imidlalo eminingi ihlelelwe uhlobo oluthile lwe-mame
kepha lapho ngifuna ukufaka i-qmc2 ngithola:
sudo apt-get ukufaka qmc2-sdlmame qmc2-sdlmess qmc2-sdlume qmc2-arcade qchdman
Kufundwa uhlu lwephakheji ... Kwenziwe
Ukwakha isihlahla sokuncika
Kufundwa imininingwane yesimo ... Kwenziwe
Awukwazi ukufaka amanye amaphakethe. Lokhu kungasho lokho
ucele isimo esingenakwenzeka noma, uma usebenzisa ukusatshalaliswa
engazinzile, ukuthi amanye amaphakeji adingekayo awenziwanga noma angenawo
Imininingwane elandelayo ingasiza ukuxazulula isimo:
Amaphakeji alandelayo anokuncika okungagcwaliseki:
qmc2-sdlmess: Kuya nge: sdlmess (> = 0.144) kepha ayifakeki noma
mess (> = 0.144) kepha ayifakeki
qmc2-sdlume: Kuya nge: sdlume (> = 0.144) kepha ayifakeki noma
ume (> = 0.144) kepha ayifakeki
E: Izinkinga azilungisekanga, ugcine amaphakheji aphukile.
Sawubona futhi ngiyabonga ngokuphawula.
Okufanele ukwenze kuleso simo ukukhohlisa uhlelo bese ufaka lawo mapakeji alifunayo, i-sdlmame ne-sdlmess.
Ngalokho inkinga yakho isixazululiwe, bese ubuyisela noma udlulise indlela lapho i-mame oyihlanganisile ikhona.
Ngizama ukuwafaka nge-apt-get install kepha ngithola okulandelayo:
sudo apt-get ukufaka sdlmess
Iphakethe le-Sdlmess alitholakali, kepha ezinye izikhombisi zephakeji
ku-. Lokhu kungasho ukuthi iphakethe alikho, alisasebenzi, noma likhona kuphela
itholakala komunye umthombo
E: Iphakheji ye- "sdlmess" ayinayo ikhandidethi yokufakwa
futhi okufanayo nge-sdlume
Sicela uzame okulandelayo.
I-sudo touch sdlmess / usr / imidlalo /
Phenya, kepha akwenzeki lutho, ngeke kungivumele ngifake ...
ukufaka i-xmame-sdl kusebenza kahle noma okungcono !! futhi uhamba uye / usr / imidlalo / mame -ngabe i-qmc2 icela i-sdl… .-.
Le mpendulo ingathatha isikhathi kepha mhlawumbe izosiza komunye okhona lapho ofuna into efanayo. Kungithathe izinsuku ezimbili ukuqoqa lonke ulwazi ukwenza i-mame isebenze kahle enguqulweni yayo yamanje: 0.153.
Uma ufuna ama-roms wale nguqulo ikhasi elihamba phambili yize lihamba kancane yiplanethiemu.net. Ozithobayo.
Angisakwazi ukuthola ukuthi ngingawahlunga kanjani ama-roms ku-qmc2 ngomsebenzi, angikwazi ukuthola inketho futhi kungiphonsela uhlu olude kakhulu olusemthethweni!
Engikuthandayo ukuthi i-qmc2 uhlelo lokusebenza lwe-Qt: D, kodwa kubi kakhulu ukuthi ngisebenzisa i-kubuntu 14.04 ngoba i-qmc2 PPA itholakala kuphela kuze kube yi-saucy.
Sawubona, ungazama ukuhlanganisa i-qmc2 ngokulanda imithombo ekhasini layo.
kungani ufaka lezi (qmc2-sdlmess qmc2-sdlume qmc2-arcade qchdman) uma sifaka kuphela i-mame?
Kulabo abenzeka lokhu vele ufake i-qmc2-sdlmame
i-sudo engeza-apt-repository ppa: mmbossoni-gmail / emu
sudo apt-get ukufaka qmc2-sdlmame
sawubona zilandwa kanjani?
UFermin Barboza kusho
Lapho wenza ukwenziwa kunikeza iphutha elilandelayo:
src / osd / sdl / sdl.mak: 456: *** Ubuntu 12.10 butholiwe. Sicela ufake amaphakheji we-gcc-4.6 no-g ++ - 4.6. Ima.
Lapho uzama ukufaka i-gcc noma i-g ++ kunikeza iphutha elilandelayo:
thola ukufaka i-gcc-4.6 -fix-missing
Amaphakeji angeziwe alandelayo azofakwa:
i-gcc-4.6-locales gcc-4.6-multilib libmudflap0-4.6-dev gcc-4.6-doc libgcc1-dbg libgomp1-dbg libquadmath0-dbg libmudflap0-dbg binutils-igolide
Amaphakeji alandelayo amasha azofakwa:
cpp-4.6 gcc-4.6 gcc-4.6-isisekelo
Kuvuselelwe okungu-0, kuzofakwa ama-3, kuzosuswa okungu-0, kuthi okungu-19 kungabuyekezwa.
Udinga ukulanda amafayela ayi-12,5 MB.
I-28,1 MB yesikhala sediski esengeziwe izosetshenziswa ngemuva kwalokhu kusebenza.
Uyafuna ukuqhubeka [Y / n]? s
ISAZISO: Amaphakeji alandelayo awakwazanga ukuqinisekiswa!
gcc-4.6-isisekelo cpp-4.6 gcc-4.6
Faka lawa mapakeji ngaphandle kokuqinisekisa [y / n]? s
Iphutha http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ i-quantal / main gcc-4.6-base amd64 4.6.3-10ubuntu1
I-404 Ayitholakali [IP: 91.189.88.153 80]
Iphutha http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ inani / okuyinhloko cpp-4.6 amd64 4.6.3-10ubuntu1
Iphutha http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ i-quantal / main gcc-4.6 amd64 4.6.3-10ubuntu1
Akunakwenzeka ukuthola http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gcc-4.6/gcc-4.6-base_4.6.3-10ubuntu1_amd64.deb I-404 Ayitholakali [IP: 91.189.88.153 80]
Akunakwenzeka ukuthola http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gcc-4.6/cpp-4.6_4.6.3-10ubuntu1_amd64.deb I-404 Ayitholakali [IP: 91.189.88.153 80]
Akunakwenzeka ukuthola http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gcc-4.6/gcc-4.6_4.6.3-10ubuntu1_amd64.deb I-404 Ayitholakali [IP: 91.189.88.153 80]
Amaphakheji alahlekile awakwazanga ukulungiswa.
E: Kulahla ukufakwa.
NgineLinux Mint Maya
Phendula uFermin Barboza
woza ngapha http://foro.desdelinux.net/
Sawubona futhi ngiyaxolisa ngokubambezeleka kokuphendula.
Ukuthi iMint Maya linux ingumngani wakudala kakhulu, kuzofanele ufake i-gcc ngesandla, ukuze ukwazi ukuhlanganisa lolu hlelo.
Yize ngicabanga ukuthi ikhona enye indlela, kepha kufanele useshe amaphakheji ngesandla kumakhosombe womlando wobuntu.
Ngicabanga ukuthi iMint Maya ibisuselwa kunembe ngqo
Kuphela, kufanele ulande amaphakheji we-gcc 4.6 njengoba kuceliwe uhlelo.
sawubona, ngingawasusa kanjani wonke amafayela?
Uma ucabanga ukuthi usho amafayela wokuhlanganisa, bese usebenzisa lo myalo esigungwini, "hlanza". Uma kuzosuswa yonke into nefolda, khuphuka umkhombandlela ngenhla nange-rm -vrf "igama lefolda".
Sawubona! NgineManjaro (archlinux) futhi ayihlanganisi
Phonsa lokhu kimi
/ usr / bin / ld: ayikwazi ukuthola -lSDL_ttf
iqoqo2: iphutha: ld ubuyise isimo sokuphuma 1
src / build / build.mak: 63: iresiphi yethagethi 'obj / sdl / build / file2str' yehlulekile
yenza: *** [obj / sdl / build / file2str] Iphutha 1
futhi angazi ukuthi yimiphi imitapo yolwazi efana naleyo oyishilo ekuqaleni, ngaphandle kokwakha okubalulekile, uma ungangisiza, ngingajabula kakhulu!
Sawubona. Ngempela udinga umtapo wezincwadi we-SDL_ttf. Ukuyifaka ku-archlinux, mane ufake ikhonsoli "pacman -S sdl_ttf".
Futhi, kufanele ube nomtapo wezincwadi we- "pacman -S sdl".
Ku-build-kubalulekile, kungenzeka ukuthi usuvele uyifakile. Lokhu okufaka ku-ubuntu nakususelwa kokunye izinsiza eziyisisekelo zokuhlanganisa.
Noma yikuphi okunye ukuphazamiseka ungangabazi ukubuza.
Sawubona! Lokho kungisebenzele! Ngiyabonga! manje benginenye iphutha, kuyangiphonsela lokhu:
Kuhlanganiswa i-src / mame / ividiyo / imodeli1.c…
src / mame / video / model1.c: Emsebenzini 'void draw_quads (model1_state *, bitmap_rgb32 &, const rectangle &)':
src / mame / video / model1.c: 307: 17: iphutha: okubhaliselwe kwamalungu afanayo kungaphezu kwemingcele yamalungu afanayo [-Werror = array-bounds]
ngenkathi (p [ps2 + 1] .y == cury)
src / mame / video / model1.c: 319: 17: iphutha: okubhaliselwe kwamalungu afanayo kungaphansi kwemikhawulo yamalungu afanayo [-Werror = array-bounds]
ngenkathi (p [ps1-1] .y == cury)
src / mame / video / model1.c: 329: 17: iphutha: okubhaliselwe kwamalungu afanayo kungaphezu kwemingcele yamalungu afanayo [-Werror = array-bounds]
src / mame / video / model1.c: 305: 17: iphutha: okubhaliselwe kwamalungu afanayo kungaphansi kwemikhawulo yamalungu afanayo [-Werror = array-bounds]
cc1plus: zonke izixwayiso ziphathwa njengamaphutha
i-makefile: 922: iresiphi yethagethi 'obj / sdl / mame / video / model1.o' yehlulekile
yenza: *** [obj / sdl / mame / video / model1.o] Iphutha 1
Konke kubonakala kukhombisa iphutha lokuhlanganisa.
Udinga uhlobo oluthuthuke kakhulu lomhlanganisi.
URafael Escamilla kusho
Sawubona, ngihlanganise inguqulo .0151 ye-MAME futhi ngaphandle kwamaphakeji owakhulumayo, i-libqt4-dev iyadingeka. Sanibonani
Phendula uRafael Escamilla
Kusetshenziswa iTelegram kusuka esigungwini
I-KDE Special: Imibhalo ethakazelisa kakhulu